ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့တွင် လော့ခ်ဒေါင်းပြုလုပ်ထားသည့်ကြားမှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအတွက် ငွေသားဆွဲဆောင်မှုဆုကြေးများ အတိုက်အခံဘက်က အဆိုပြု - Xinhua News Agency
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ဘရစ်စဘိန်းမြို့ရှိ ကွင်းစ်လန်းတက္ကသိုလ် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် သုတေသီတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- University of Queensland/Handout via Xinhua)
ကန်ဘာရာ၊ ဩဂုတ် ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ လူဦးရေထူထပ်သော ဆစ်ဒနီမြို့တွင် Delta ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုကို ဆက်လက်တိုက်ဖျက်နေချိန်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု ခံယူမည့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားများအား ငွေသားဆွဲဆောင်မှုဆုကြေးတစ်မျိုးကို ဩဂုတ် ၂ ရက်၌ အတိုက်အခံပါတီက အဆိုပြုထားကြောင်း သိရသည်။
လေဘာပါတီခေါင်းဆောင် Anthony Albanese က ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မတိုင်မီ ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝ ထိုးနှံသူ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတိုင်းကို ဩစတြေးလျဒေါ်လာ ၃၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၀.၈) ငွေသားဆုကြေး ပေးအပ်မည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ဩဂုတ် ၂ ရက်က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းအဆိုပြုချက်သည် ခန့်မှန်းခြေ ဩစတြေးလျဒေါ်လာ AUD ၆ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄.၄ ဘီလီယံ) ကုန်ကျနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း လော့ခ်ဒေါင်း (lockdown) အဆက်မပြတ် ပြုလုပ်ခြင်းက ကုန်ကျစရိတ်သိသိသာသာ ပိုမိုများပြားမည်ဖြစ်ကြောင်း Albanese က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒါက လူထု လော့ခ်ဒေါင်းပြုလုပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်တဲ့ တစ်ပတ်ကို AUD ၂ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၄ ဘီလီယံ)နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ မပြောပလောက်တဲ့ ပမာဏဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက Nine Network ရုပ်မြင်သံကြားသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒါကြောင့် ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းရုံသာမက လော့ခ်ဒေါင်းတွေကြောင့် အလုပ်သမားတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တွေ အမှန်တကယ် ရုန်းကန်နေရချိန်မှာ အားပေးမှု ပိုမိုလိုအပ်မှုလည်း ပံ့ပိုးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”
ဝန်ကြီးချုပ် စကော့ မောရစ်ဆင် (Scott Morrison) ကလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါအတွက် အဆင့်လေးဆင့်ပါဝင်သော လမ်းကြောင်း၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဇူလိုင် ၃၀ ရက်က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်အရ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားများသည် အရွယ်ရောက်လူဦးရေ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း အပြည့်အဝ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးချိန်တွင် လွတ်လပ်စွာ ခရီးသွားလာခွင့် ရရှိနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
ဩဂုတ် ၂ ရက်အထိ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား ၁၉.၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ် ထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ငွေသား ဆွဲဆောင်မှုဆုကြေးများက ဩစတြေးလျနိုင်ငံအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ဆောလျင်စွာ ပြည့်မီရန် အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း Albanese က ဩဂုတ် ၂ ရက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားထားသည်။
“ဒါကို မြန်မြန်ရရှိလေ လော့ခ်ဒေါင်းတွေ ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာမှ နေ့စဉ် ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ချီပြီး ယိုစိမ့်မှုတွေကနေ မြန်မြန် နာလန်ထူလေဖြစ်မှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Simon Birmingham ကမူ ၎င်းအဆိုပြုချက်အပေါ် “အလုပ်ဖြစ်မည်မဟုတ်ကြောင်း” တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ဩဂုတ် ၂ ရက်အထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ ၃၄,၆၁၁ ဦးရှိကြောင်းနှင့် လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ရောဂါကူးစက်မှု အရေအတွက်မှာ ၂၂၂ ဦးရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ (Xinhua)
Australian opposition proposes cash incentives for COVID-19 vaccines amid lockdown in Sydney
Source: Xinhua| 2021-08-03 10:37:03|Editor: huaxia
CANBERRA, Aug.3(Xinhua) — Australia’s opposition proposedacash incentive for Australians to get vaccinated on Tuesday when the country’s most populous city of Sydney continued to battle the outbreak of COVID-19 triggered by the Delta variant.
Anthony Albanese, the leader of the Labor Party, on Tuesday revealedaplan to offer every Australian who is fully vaccinated by Dec. 1a300 Australian dollar (220.8 U.S. dollar) cash bonus.
The proposal would cost an estimated6billion AUD (4.4 billion USD) but Albanese argued that constant lockdowns across the country were costing significantly more.
“That’sasmall amount compared with the2billion AUD (1.4 billion USD)aweek that these mass lockdowns are costing our national economy,” he told the Nine Network television.
Prime Minister Scott Morrison on Friday revealed details ofafour-phase pathway out of the coronavirus pandemic.
Under the plan, Australians would be granted greater travel freedoms when 80 percent of the adult population is fully vaccinated.
As of Monday, about 19.2 percent of Australian adults had received two vaccine doses.
Inastatement on Tuesday, Albanese said that cash incentives would help Australia reach 80 percent coverage earlier.
Responding to the proposal, Finance Minister Simon Birmingham said it “won’t work.”
As of Monday afternoon, there had been 34,611 confirmed cases of COVID-19 in Australia, and the number of locally acquired cases in the previous 24 hours was 222, according to the latest figures from the Department of Health. Enditem
File photo taken on April 1, 2020 showsaresearcher working atalab of the University of Queensland (UQ) in Brisbane, Australia. (University of Queensland/Handout via Xinhua)